Uyigcina njani i-Safari PDF kwisicelo seNqaku | Ndisuka mac
Uyigcina njani i-Safari PDF kwiNkqubo yamaNqaku
Kwizihlandlo ezininzi kufuneka senjenjalo vula amaxwebhu e-PDF kwiwebhusayithi okanye ngokuthe ngqo kwikhonkco leSafari kwaye ukugcina olu xwebhu kulula kakhulu. Namhlanje siza kubona ukhetho esinalo ukuba sifuna ukuba olu xwebhu lugcinwe kwiiNqaku zethu kwaye sabelane ngalo nabani na esimfunayo. Into ebonakala inzima ukuyenza ilula kwaye sinokhetho kunye nokudlulisa iPDF nge-imeyile, Imiyalezo okanye nakwesinye isixhobo ngeAirdrop. Ke masibone ukuba ungalugcina njani olu xwebhu lwePDF kumaNqaku.
Amanyathelo alula kakhulu kodwa kufuneka sikhumbule ukuba ukuba uxwebhu lunamaphepha aliqela, kufuneka sizikhethe zonke ukuze zigcinwe kwiNqaku. Ukuba asiyenzi kwaye inamaphepha aliqela, siya kugcina eyokuqala, kodwa masihambe ngamanyathelo. Into yokuqala ukuvula i-PDF kwi-Safari kwaye cinezela Cofa ekunene ukuzisa ukhetho lokuvula ngokujonga kuqala:
Ngoku siyifumene kuPreview kwaye into ekufuneka siyenzile yile Khetha onke amaphepha ngokubamba iShift kwaye uskrole ukuphela kwePDF kwikholamu yasekhohlo de zonke zikhethwe.
Ngoku kufuneka ucofe ukhetho lokugcina oluvela ngqo kunye uphawu lokwabelana (isikwere kunye notolo) kunye ne-voila. Sikhetha amanqaku kwaye le PDF iya kugcinwa ngokupheleleyo kwisicelo sethu, sinokongeza isicatshulwa esincinci okanye sidibanise kwinqaku esele likho. Nangona kuphela iphepha lokuqala loxwebhu elivela kwisicelo seNqaku, ukucofa kulo kuvula kuHlolisiso kwaye onke amaphepha ePDF agqityiwe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Tutorials » Uyigcina njani i-Safari PDF kwiNkqubo yamaNqaku
I-Apple kunye neenkcukacha zayo xa kugqitywa iimveliso
I-Western Digital iveza ii-SSD zam zangaphandle zePasipoti ukuya kuthi ga kwi-1TB nge-USB-C